पाइताला चिसो र नङ पहेँलो हुन्छ ? खुट्टाको यी ६ लक्षण हुनसक्छ बिरामीको सङ्केत - Synergyfm
२२ फाल्गुण २०७७, शनिवार | Mar 06, 2021 | 07:52:49
पाइताला चिसो र नङ पहेँलो हुन्छ ? खुट्टाको यी ६ लक्षण हुनसक्छ बिरामीको सङ्केत
By synergyfm on	 February 20, 2021 जिवनशैली, समाज, स्वास्थ सरोकार
चितवन,फागुन ०८ । खुट्टाले तपाईंको शरीरमा रोगहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ । हामी जुत्ता र मोजा लगाएको कारण हामी खुट्टामा कम ध्यान दिन्छौं, तर यी केही कुराहरु नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । खुट्टामा देखिने साधारण लक्षण कुनै बिरामीको संकेत हुनसक्छ । आउनुहोस् यसको बारेमा चर्चा गरौँ ।
सामान्यतया फुटेको कुर्कुच्चाको रेखाहरू बाम वा मलम लगाउदा साथ निको हुन्छ। अष्ट्रेलियाको फुटकेयर ब्रान्ड फ्लेक्सिटोलका विज्ञहरूले ‘द सन’ वेबसाइटलाई भनेका छन् कि मानिसहरू प्रायः फुटेको खुट्टालाई वेवास्ता गर्छन् तर यदि उपचार नगरिएमा दुखाइ बढ्न सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, खुट्टा त्रबाट यति धेरै फाडिएको हुन्छ कि त्यहाँबाट रगत बाहिर निस्कन थाल्छ।
खुट्टामा गिर्खा आउनु
फिटिङ जुत्ता लगाउनाले खुट्तामा फोका वा गिर्खा देखापर्दछ । यसको अलवा हड्डी रगडिएर, मोटोपन वा मधुमेहसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ ।
यसले ठूलो असर त गर्दैन तर यसको कारण छाला चिलाउने समस्या देखिन्छ । पोडियाट्रिस्ट डाक्टर दिना गोहिलले मेलअनलाइनलाई भनेका छन् ‘आनुवंशिकीय बनहरू प्रायजसो सामान्य कारणहरू हुन्। यो गठिया वा कुनै चोटपटक लागेर पनि हुनसक्छ ।’ यसबाट जोगिन उनले खुट्टाको व्यायाम बाहेक खुट्टामा पर्याप्त ठाउँ पाउन सक्ने जुत्ता लगाउन सल्लाह दिएका छन् ।
पैताला चिसो हुनु
धेरै व्यक्तिको पैताला अक्सर चिसो हुन्छ। यद्यपि पैताला न्यानो कपडाले ढाक्न वा मोजा लगाएर सामान्य गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भन्छन् कि चिसो माटोमा हिंड्नु भनेको रायनौड रोगको लक्षण हुन सक्छ। यो एक यस्तो रोग हो जसले रगत संचारलाई असर गर्छ।
सामान्यतया खुट्टा सुन्निएको आफैँ निको हुन्छ तर यदि यो आफैं ठिक हुँदैन भने एडिमा हुनसक्छ ।
नङ पहेँलो हुनु
यदि तपाईंको खुट्टाका नङ पहेंलो भइरहेका छन् भने यो फंगल संक्रमणको लक्षण हुन सक्छ। केहि मानिसहरुमा, यो अधिक नेलपेन्ट लगाएर पनि हुन सक्छ, तर गाढा पहेंलो रंग फंगल संक्रमणको सङ्केत हुन सक्छ।